Banyere Anyị - Yueqing CROP Trading Co., Ltd.
Yueqing CROP Trading Co., Ltd. Njikọ
Gbado anya na ndị na-emepụta ngwa ọrụ nkwukọrịta weta nkwa nke nwere ntụkwasị obi maka njikọ netwọk telecom
CROP TELECOM - Uwa ama ama amaara amaara ama
11 afọ nọgidere ịzụlite ahụmahụ na ụlọ ọrụ nkwukọrịta nkwukọrịta
Hazie ngwaahịa dịka mkpa gị pụrụ iche
E guzobere CROP telecom na 2010 ma nwee afọ iri na otu nke ahụmahụ na mmepụta nke na-enyefe ngwa ngwa nkwukọrịta. Anyị bụ ndị mba na mba mpi telekomunikashions nkwukọrịta ụlọ ọrụ usoro na-eweta ọrụ tụnyere R & D, n'ichepụta, mmepụta, ahịa na ọrụ, na-agba mbọ iji na-enye nchebe na a pụrụ ịdabere na nkwukọrịta ngwa ka ọrụ gburugburu ụwa. Mgbe ihe karịrị afọ iri nke na-aga n'ihu mmepe na ọhụrụ, CROP telecom aghọwo a na-eduga mba emeputa nke nkwukọrịta akụrụngwa na China.
Ikwesiri iburu n'uche na anyị bụ CROP dị na Wenzhou Yueqing nke ụlọ ọrụ ga-abụ otu narị afọ nke ụlọ ọrụ. Anyị na-elekwasị anya na ndị nrụpụta ngwongwo nkwukọrịta ma weta nkwa a pụrụ ịtụkwasị obi ma dị mma maka njikọ netwọk telecom.
Isi ihe nkwukọrịta nkwukọrịta mepụtara nke CROP telecom gụnyere ngwa anya eriri ADSS USB, ngwa anya eriri FTTX USB, ngwa ADSS & FTTX njikọ mwekota, ADSS & FTTX nkwusioru mwepu, na-eme ka ọ dị mma, na-eme ka ndị nwụrụ anwụ gwụrụ. Igwe anaghị agba nchara banding Ngwa: igwe anaghị agba nchara banding, igwe anaghị agba nchara nkechi, Ngwongwo igwe anaghị agba nchara, Horsnyịnya mwekota. Cable lug: crimp lug, Ọnụ njikọ, Copper braided Waya, Ọnụ, Crimping tool.ABC ngwa: Mkpuchi ịkpọpu akụkụ njikọ, Nkesa igbe, USB gland wdg OEM ngwaahịa: Anyị nwere onwe anyị ngwaahịa mmepe ngalaba, anyị nwere ike hazie ngwaahịa dị ka gị pụrụ iche chọrọ.
N'ime afọ 10 gara aga, e rerela ngwaahịa anyị karịa mba 100 gburugburu ụwa.
11 afọ emeputa ahụmahụ!
CROP telecom nwere ahụmịhe afọ iri na otu nke 11, ngwaahịa anyị dị mma ma nwee ntụkwasị obi, yabụ CROP telecom bụ nhọrọ mbụ maka ịhọrọ ndị na-eweta ngwaahịa na China.
Jighi njiri mara mma!
Anyị ga-enyocha ngwaahịa ndị a n'oge usoro mmepụta yana tupu nnyefe iji hụ na ndị ahịa na-enweta ngwaahịa na-eju afọ.
Na nnyefe oge!
Anyị na-ekwe nkwa na a ga-enyefe iwu ọ bụla n'oge ma ọ bụ n'ọdịnihu.
Tupu ịtụ wee, anyị nwere ike na-enye ndị free sample gị achọpụta.
Anyị nwere ike ime OEM!
Anyị nwere ike ịnabata ndị ahaziri. Ọ bụrụ na ị na-ahaziri, biko zitere anyị gị osise ma ọ bụ sample.